News from myanmaritmen.org - クリーニングで鞄や布団を綺麗にする事ができる
Myanmaritmen - myanmaritmen.org - クリーニングで鞄や布団を綺麗にする事ができる
Interview By Internet Journal About Myanmar Communication Draft Law	15 Nov 2012 | 10:58 pm
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်သူရိန်ထွန်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကြမ်းအကြောင်း မေးမြန်းခြင်း ၁။ ဒီလ ၇ ရက်နေ့က ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေကြမ်းထွက်လာပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ဒီဥပဒေအ...
Myanmar Lottery Android App	27 Oct 2012 | 03:28 pm
ဆော့ဖ်ဝဲလ်နာမည်က Myanmar Lottery ဆိုပြီး ပေးထားပါတယ်။ Version 1.0 ဖြစ်ပါတယ်။ Android OS version 2.2 နှင့်အထက် တင်ထားတဲ့ စမတ်ဖုန်း မှန်သမျှမှာ Install လုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ် လုပ်ပေးနိ...
Embed Images in HTML with Base64 Encoding	6 Oct 2012 | 04:38 pm
HTML မှာ ပုံတွေထည့်ရင် ပုံမှန်အားဖြင့် img tag ထဲမှာ src ဆိုပြီး ပုံရဲ့ တည်နေရာကို ညွှန်းကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် <img src="images/logo.png"/> အဲဒီနည်းလမ်းအစား နည်းနည်းလေးပိုပြီးထူးတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုနဲ့ ...
HOW TO USE LAYER STYLE (1)	31 Jul 2012 | 02:47 pm
HOW TO USE LAYER STYLE (1) How to use layer style (1) | www.forevervivi.com How to use layer style (1)
Untitled	30 Jul 2012 | 04:31 am
Facebook တွင် Report တင်နည်း..	29 Jul 2012 | 04:18 am
Facebook တွင် Report တင်နည်း.. မဟုတ်တာတင်ရင် မဆဲပါနှင့် Report သာလုပ်လိုက်ပါ Facebook တို့ Blogger တို့ဟာ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျကျနဲ့ လည်ပတ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို ကြိုက်တာတင်ခွင့်၊ ရေးခွင့်ပေးထားပါတ...
HTML5 နဲ့ CSS3 ကိုအသုံးချပြီး On/Off Flipswitch ရေးနိုင်မယ့် code ပါ။	26 Jul 2012 | 03:40 am
HTML5 နဲ့ CSS3 ကိုအသုံးချပြီး On/Off Flipswitch ရေးနိုင်မယ့် code ပါ။ On/Off Flipswitch HTML5/CSS3 Generator - Proto.io proto.io Generate pure CSS3 On/Off flipswitches with animated transitions. As e...
HOW TO CREATE PENCIL DESIGN : Now this Website is Under Updating, may have some...	10 Jul 2012 | 01:38 am
HOW TO CREATE PENCIL DESIGN : Now this Website is Under Updating, may have some link error & sometimes have database error too. Will fix all and post more lessons file ASAP. Thanks. PENCIL DESIGN | w...
အသံအား စာသားအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည့် ၀န်ဆောင်မှုကို အခမဲ့ပေးသော Website ဖြစ်ပါတယ်။	2 Jul 2012 | 04:49 am
အသံအား စာသားအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည့် ၀န်ဆောင်မှုကို အခမဲ့ပေးသော Website ဖြစ်ပါတယ်။ VoiceBase - Store, Search and Share Recordings www.voicebase.com VoiceBase allows to keyword search, share and store au...
Untitled	25 Jun 2012 | 06:22 pm
iPhone 5, Galaxy Note2နဲ့ Windows Phone 8 တို့ အောက်တိုဘာလမှာ တပြိုင်နက်တည်းထွက်မည် Samsung, Microsoft နဲ့ Apple တို့ဟာ ၂၀၁၂ အောက်တိုဘာလမှာ သူတို့ရဲ့ Smart Phone အသစ်တွေကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိတော့မှာြ...